इन्डोनेसियाको जाकार्ताबाट उडेको विमान समुन्द्रमा खस्यो ! - Malayakhabar
होम पेज फिचर इन्डोनेसियाको जाकार्ताबाट उडेको विमान समुन्द्रमा खस्यो !
इन्डोनेसियाको जाकार्ताबाट उडेको विमान समुन्द्रमा खस्यो !
एजेन्सी := शनिबार इण्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट उडान भरेको केही समयमै सम्पर्कविहीन भएको विमान समुन्द्रमा खसेको आशंका गरिएको छ । श्रीविजया एयरको बोइङ ७३७ जाकार्ताबाट वेष्ट कलिमनतन प्राप्तको आकासमा पुग्दा सम्पर्कविहिन भएको थियो ।
२६ वर्ष पुरानो यो विमानमा ६२ जना सवार थिए । ५६ यात्रु थिए, जसमध्ये ३ शिशु र ७ बालबालिका छन्। दुई पाइलट र चार चालक दलका सदस्य थिए । फ्लाइट राडर २४ का अनुसार विमान एक मिनेटभन्दा कम समयमा १० हजार फिट तल झरेको थियो । यो विमान समुन्द्रमा खसेको आशंका गरिएको छ ।
समुन्द्रमा केही शंकास्पद शवशेषहरु पनि भेटिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार उनीहरुले ठूलो आवाज सुनेका थिए । सोलिहिन नाम गरेका एक व्यक्ति, जो माछा मार्ने काम गर्थे,ले बीबीसी इण्डानेसिया सर्भिसलाई बताएका छन् कि उनले विमान दुर्घटना भइरहेको देखेका थिए । लगतै आफ्नो क्याप्टेनका साथ समुन्द्रमा गए । उनले भनेका छन्, ‘विमान विजुली झै समुन्द्रमा खस्यो र पानीमा विस्फोट भयो ।’ विमानका केही अवशेष पनि भेटिएको छ।
त्यहाँको नेशनल रिसर्च एण्ड रेस्क्यू एजेन्सीका अधिकारीहरुले भने दुघर्टना स्थल पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । समुन्द्रको एक स्थानमा अवशेषहरु भेटिएको स्वीकार गर्दै एक अधिकारीले भनेका छन्, ‘समुन्द्रको गहिराई २०/२३ मिटर छ, हामी खोजतलास गरिरहेका छौँ , चाडैं दुर्घटना स्थल पत्ता लगाउँछौं ।’
अघिल्लो लेख नेपालको पासपोर्ट संसारकै खराब सूचीमा।
पछिल्लो लेख लन्डनमा गायक केसीले फेसबुकमा ‘गुडबाई’ लेखेर गरे आत्महत्या।